“Neymar waxa uu tijaabada caafimaad u maray Real Madrid.”. Florentino Perez – Gool FM
Zidane oo cadeeyay in Real Madrid ay taageersan tahay, xilli uu shaaca ka qaaday go’aankiisa kaga aaddan Ramos
RASMI: Mourinho iyo Moyes oo hoggaaminaya liiska musharaxiinta abaal-marinta macallinka bisha November ee Premier League
“Neymar waxa uu tijaabada caafimaad u maray Real Madrid.”. Florentino Perez
Byare June 20, 2017
(Spain) 20 Juunyo 2017. Madaxwaynaha Real Madrid Florentino Perez ayaa daaha ka rogay inuu qarka u fuulay inuu la soo wareego xiddiga reer Brazil ee Neymar ka hor inta uusan ku biirin kooxda ay sida wayn u coltamaan ee Barcelona.
“Neymar wuxuu tijaabada caafimaad u maray Real Madrid, waxaan isku daynaya inuu yimaado, laakiin waxaan aragnay in hal meel oo aysan suuro gal ku noqoneyn waxaana ka baxnay heshiiska,” Madaxwayne Perez ayaa sidaa u sheegay Onda Cero.
Neymar ayaa markii dambe ku biiray Barcelona sanadii 2013, iyadoo intaa kaddib ay Los Blancos dooratay inay lacago badan khasirto isla suuqaas ay la soo saxiixan waayeen Neymar.
Waxay lacago rikoodh ka noqday suuqa kala iibsiga Tottenham kaga soo iibsatay xiddiga iminka garabka kaga duula ee Gareth Bale bishii September 2013.
Chelsea oo maalmaha yar ee soo socda soo xero galineysa saxiixeedii ugu horreeyay...(Waa kuma?)